Myanmar Monk Student Association: ကျောက်ကွင်းဝါဒပြိုင်ပွဲ (၂၉)
ယေရှုခရစ်ဘာ့ကြောင့် ဘာလုပ်ဖို့လာသလ?ဲ ဆိုတဲ့ကိစ္စကို ကြည့်ရင်အလွနရ်ှင်းနေပါတယ်။ သတ္တ၀ါအများကို ကယ်တင်ရန်လာတယ်လို့ပြောတယ်။ အဒဲီသတ၀္တါဆိုတာ အကုန်လုံးကို မဟုတ်ဘူး။
ဣသရေလ(ဂျုး)လူမျိုးတို့ကိုသာ ဆိုလိုတာပါ။ ဗမာ၊ ကရင်၊ ချင်းတို့ဟာ ဒီအချက်ကို အထူးသတိပြုဖို့
လိုပါတယ်။ နက်နက်နဲနဲစဉ်းစားကြဖို့ ကောင်းပါတယ်။ (ရှင်မဿဲခရစ၀် င)် အခန်း(၁၀)၊ အပိုဒ(် ၅)မှာ
သင်တို့သည် တစ်ပါး အမျိုးသားတို့ ရှိရာသို့ မသွားကြနှင့် ရှမာရိ(ဆမားရိယန်း) မြို့ရွာထဲသို့ မ၀င်ကြနှင့်၊
ဣသရေလအမျိုး ပျောက်လွင့်သော သိုးများရှိရာသို့ အရင်သွားကြလော့လို့ ယေရှုကိုယ်တိုင် ပြောခဲ့တဲ့
စကားကိုထောက်ရင် တခြားလူမျိုးတွေ အတွက် ခရစ်တော် ပေါ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။
“ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရား ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာ ကမ္ဘာသူ၊ ကမ္ဘာသား လူမျိုးမခြား၊ အားလုံး အတွက်
ဖြစ်ကြောင်း ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်တဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ (ဗုဒ္ဓေါ လောကေ သမုပ္ပန္နော ဟိတာယ သဗ္ဗပါဏိနံ၊ဗုဒ္ဓေါ လောကေ ဥပ္ပဇ္ဇတိ ဗဟုဇနဟိတာယ သုခါယ အတ္ထာယ)အစရှိတဲ့ လောကတစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်း အဆအို မိန့် အထောက်အထားတွေအများကြီး ရှိပါတယ်။ အဒဲါကြောင့် ဦးပဇင်းတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်ပေါ်လာရခြင်းကတော့ခရစ်တော်နှင့်မတူဘဲကမ္ဘာသူ၊ ကမ္ဘာသားဆိုရင်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သတ္တ၀ါအားလုံးအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါက ဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်တ့ဲ အချက်ဖြစ်တယ်။
ဟောဒီဓမ္မဆရာကြီးများလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်များကို သိပြီးနားလည်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်နေရာ ဘယ်ပါဠိတော်များမှ ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားဟာ သတ္တ၀ါခွဲခြားမှု ငါ့ကိုသာ ကိုးကွယ်ကြ၊ ငါ့ကို
မကိုးကွယ်တဲ့လူကို သတ်ကြ၊ ဖြတ်ကြလုိ့ ဟောတဲ့ စကားလုံးများ တွေ့ဖူးကြပါသလား။ ပါတယ်ဆိုရင်
အခုထောက်ပြကြပါ။ ဦးပဇင်းက အရှုံး ပေးလိုက်ပါ့မယ်”။
“သူဟောတဲ့တရားကို လိုက်နာကျင့်သုံးသူ၊ သူညွန်ပြတဲ့ တားမြစ်ချက်ကို မလုပ်ဘဲရှောင်ကြဥသ်ူ
မည်သူမဆို နှာခေါင်းချွန်သူဖြစ်စေ၊ လုံးသည်ဖြစ်စေ၊ ပြားသည်ဖြစ်စေ ဧကန်မုချ သံသရာမှ လွတ်ခွင့်ရမယ်တဲ့
လက်တွေ့သိချင်ရင် လူ့လောက ကိလေသာကုန်ရေး တရားကို အားထုတ်ကျင့် ကြံကြည့်ပါ။ မှန်တာတွေချည်းဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါ့မယ်။ အဒဲီတရားကို တကယ်ယုံကြည်လို့ အားထုတ်ရင်တကယ်ပင်ဒ၀ီ ဋ်ဆင်းရဲတို့ရဲ့ဒုက္ခသား လောကီဘုံမှာ နေရင်း ငုတ်တုတ်တစ်ဆက်တည်း ငြိမ်းချမ်းမှု အမှန်ကိုတွေ့ရမယ်။ သံသရာကလွတ်ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဒဲါဟာ ဗုဒ္ဓဂေါတမတရဲ့ သန္ဒိဋ္ဌိက (ကိုယ်တွေ့၊လက်င်း)၊ အကာလိက(အခါကာလမဆိုင်းပ)ဲ တရားတော်ရဲ့ ဂုဏ်နအဲ့ ညီဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကျင့်ရင်ကျင့်သူရမယ်။ သူတစ်ပါးကိုလုပ်ပေးလို့ မရဘူး။ ကိုယ်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် သူတစ်ပါးကလည်း လုပ်ပေးလို့ မရပါဘူး”။
“ကိုယ့်အဖို့ ထမင်းဝချင်ရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စားမှ ထမင်းဝမယ်” ဆိုတဲ့စကားဟာ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ဝါဒ
အဆအို မိန့်နှင့် ကိုက်ညီတဲ့စကားပေါ့။ အဒဲီရှင်မဿဲ ခရစ၀် င် အပိုဒ(် ၃၄)ရောက်တော့ခရစ်ပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းကို ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်က အတိအလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ မြေပေါ်သို့ ငြိမ်သက်ခြင်းကိုစေလွတ်အပ်သောငှာ ငါလာသည်ဟု မထင်ကြလင့်၊ ငြိမ်သက်ခြင်းကို စေလွတ်အပ်သောငှာငါလာသည်မဟုတ်၊ ဓါးကို စေလွတ်အပ်သောငှာ ငါလာသတည်းတဲ့။ အခန်း(၃၅)မှာတော့ “အဖနှင့်သား၊
အမိနှင့်သမီး၊ ယောက္ခမနှင့်ချွေးမအချင်းချင်း ကွဲပြားစေချင်းငှာ ငါလာသတည်း”။ အဒဲါယေရှုခရစ်တော်
“အဒဲါဟာ သခင်ယေရှုရဲ့ မေတ္တာတော်တွေပါပဲဗျ၊ ဘာလုပ်ဖို့လာသလဲဆိုတာ ရှင်းမနေပေဘူးလား?
အဲဒါ ဘုရားတဲ့လားဗျာ ..?
“ဘာလုပ်ဖို့လာတယ်ဆိုတာ စဉ်းစားစရာလိုသေးသလာ? ဦးပဇင်းက တမင်ထွင်ပြီးတော့ ပြောတာ
မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမ်းစာအထဲမှာ ပါတဲ့အတိုင်း ပြောရတာပါ။ ဣသရေလ လူမျိုးမှ တစ်ပါး အခြားလူမျိုးကို
ငါကယ်တင်ရန် လာသည်မဟုတ်။ ဓါးကို စေလွတ်ရန် လာတယ်ဆိုတော့ ပြောရမှာတောင် တော်တော်
ခက်ပါတယ်။ အေး….တစ်ခုတော့မှန်ပါရဲ့, အချင်းချင်းကွဲပြားစေရန်၊ မုန်းတည်းစေရန်လာတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းယေရှုဘာသာကို ယုံကြည်ကြတဲ့နေ့ကစပြီး ဗမာအချင်းချင်းလည်း ကွဲရတယ်၊ ကရင်၊ ချင်းတို့လည်းကွဲကြရတယ်။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေလည်း ပျက်ပြားရတယ်။ အနေအစားလည်း ကွဲတယ်၊
အယူအဆလည်း ကွဲတယ်၊ သွေးစည်းမှုလည်းကွဲလို့ ပျက်နေပြီ၊ အဲဒါ ခရစ်ယာန်ဝါဒရဲ့ အကျိုးပဲပေါ့”။
“နီပေါလ်ပြည်မှာ `သမ္မာကျမ်းစာနောက်က `ဓါး´ပါတယ်´ ဆိုတဲ့စကားပုံရှိတယ်။ ခရစ်ယာန်
သာသနာပြုရဲ့ နောက်အပ်ုချုပ်တဲ့ အစိုးရလိုက်လာတယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ဗမာပဲချင်းပဲ ကရင်ပဲလို့
ကွဲပြားနေတာဟာ ခရစ်ယာန်ဝါဒကြောင့်လို့ အတတ်ဆိုစရာ ဖြစ်မနေပေဘူးလား။ ဦးပဇင်းကိုယ်တိုင်ကတော့မိတ်ဆွေဓမ္မဆရာများနှင့်တကွခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်မြန်မာ၊ ကရင်၊ ချင်းတို့ကို ဘာသာအယူဝါဒပင်ကွဲပြားနေသော်လည်း တပြည်ထဲက မွေးပြီး တမိထဲက ပေါက်ဖွားတဲ့ သွေးတူသားတူ တွေမို့ မုန်းတီးဖို့ ဟောတဲ့တရားကို မလိုက်နာလိုပါဘူး။ ဦးပဇင်းအနေနဲ့ ဒီကွဲနေတဲ့ စိတ်ထား စေတနာတွေကို စဉ်းစားမိပြီး
သဘောပေါက်နေလို့ ကိုယ့်သွေးသားချင်းတွေပဲဆိုတဲ့အနေနဲ့ မမုန်းတော့မမုန်းပါဘူး၊ ဘာသာဆိုတာကတော့ ကြိုက်တာယုံပေါ့၊ ယူကြပေါ့၊ လူမျိုးချင်းအနေနဲ့ ဘာသာရေး အကြောင်းပြုပြီး ကွဲရတာမျိုးတော့ဦးပဇင်းမကျေနပ်ဘူး။ ကွဲခံရတာကို မကျေနပ်တာကို ပြောတာပါ၊ မုန်းတော့ မမုန်းပါဘူး”။
“ဦးပဇင်းတို့ရဲ့ ဂေါတမကတော့မုန်းတီးဖို့ မဟောခဲ့ဘဲချစ်ဖို့ကိုသာ ဟောတော်မူခဲ့တာကိုး၊
မုန်းတာဟာ မကောင်းပါဘူး။ ဘာသာရေးဆိုတာ အလွနအ် ရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စမို့ အရမ်းမယုံဘဲနက်နက်နဲနဲ အထူးစဉ်းစားကြဖို့ လိုပါတယ်။ မစဉ်းစားရင် မှားတတ်ပါတယ်၊ လူတိုင်းမှာ လွတ်လပ်ခွင့်ရှိလို့ ယုံချင်တာကို
ယုံနိုင်ပါတယ်။ အခုဦးပဇင်းပြောတာကို ယုတ္တိ ရှိ/မရှိ အကျိုးအကြောင်း ညီ/မညီ ကိုသာ စဉ်းစားဖို့ ပြောတာပါ။
စဉ်းစားပြီးမှ ယုံဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ဦးပဇင်းရဲ့ ၀ါဒကတော့ ကိုယ်လည်းအရမ်းမယုံချင်ဘူး။
သူများကိုလည်းပဲ အရမ်းမယုံစေချင်ဘူး။ နည်နည်းတော့ စဉ်းစား စေချင်ပါတယ်။ အ…ဲ ဒါပေမယ့်
ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ အမှားအမှန်ကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားမယ် ဆိုရင်တော့ ဦးပဇင်းက ပြောပါ့မယ်။ မှားသလား?
မှန်သလား? စဉ်းစားကြပေါ့လေ။ ဦးပဇင်းတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ဆင်ခြင်တုံ တရားကို အများကြီးအားပေးတဲ့
“ကိုယ့်ဘာသာ မယုံလို့ တစ်ဘက်ဘာသာဝင်တွေကို သတ်လားဖြတ်လား ဘယ်တော့မှ မလုပ်ပါဘူး၊
ယုံရင်လိုက်နာကိုးကွယ်ကြ၊ မယုံကြည်ရင်လည်းနေပေါ့၊ ဦးပဇင်းတို့ ဘုရားရဲ့ဝါဒအရ ဦးပဇင်းတို့က မျက်နှာမပျက်ပါဘူး။ ဦးပဇင်းတို့ရဲ့ ဇရပ်တွေကျောင်းတွေရှိတယ်၊ ဘယ်ဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ် လာနိုင်တယ်၊
တည်းခိုနိုင်တယ်။ ဦးပဇင်းတို့က မရှိ ရှိတာတောင် ကျွေးမွေးပါဦးမယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ ယုံကြည်ကြပါလို့
မဆိုလိုပါဘူး။ ဒုက္ခဖြစ်နေရင်, ခိုကိုးရာမရှိဖြစ်နေရင် ဘယ်လူမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူသားချင်းချင်းကို ဦးပဇင်းတို့က
မျက်နှာမပျက်စေပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကလည်း သဗ္ဗေသတ္တာ သတ္တ၀ါအကုန်လုံးကို မေတ္တာတူထားပါတယ်။
ဒါလည်း ဒီခရစ်ယာန်ဘက်က ချေပကြမည့် ဓမ္မဆရာကြီးတွေသိပြီးသားပါ၊ ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လား?။
“ဦးပဇင်းတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားက ဘာမဆို မစုံစမ်း မစစ်ဆေးဘဲနှင့် အရမ်းမယုံဖို့ကိုတော့
ဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်လို ဇွတ်ယုံရမယ်၊ မယုံရင်သတ်မယ် ဖြတ်မယ်လို့ မဟောခဲ့ပါဘူး၊ လုပ်လည်းမလုပ်ရပါဘူး၊ လုပ်လို့လည်း ဂေါတမဘုရားရှင်က မဟောခဲ့ပါဘူး။ ခရစ်ယာန်ကတော့ မယုံတဲ့လူ
သတ်ပစ်လေလေ လက်ခုပ်တီးလေလေပေါ့၊ ဟုတ်ကဲ့လား..?။
“အဒဲါဟာ ရက်စက်မှုနဲ့ မေတ္တာထားပုံ ခြင်းကွာခြားတယ်ဆိုတာပါပ”ဲ ။
“ဦးပဇင်းတို့ရဲ့ ဂေါတမရှင်တော်ဘုရားဟာ အထင်အရှားပွင့်တော်မူခဲ့ကြောင်း ပါဠိတော်တွေ
အဋ္ဌကထာတွေအစရှိတဲ့ ပါဠိဘာသာကျမ်းစာတွေကို ဖယ်ထားလိုက်ဦးတော,့ အိန္ဒိယ ရှေးရာဇ၀င်များအရပဲထင်ရှားနေပါပြီ၊ ရှေးဟောင်းရှာဖွေလေ့လာရေး သုတေသနဌာနများကလည်း လိုက်လံရှာဖွေပြီး တူးဖေါ်ကြတဲ့အခါမှာ ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားရဲ့ မွေးဖွားရာ အရပ်မှာ အာသောကမင်းကြီး စိုက်ထူခဲ့တဲ့ ကျောက်တိုင်ကြီးကိုယခုတိုင်တွေ့ရပါသေးတယ်။ မယုံလျှင် သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်၊ ရှင်တော်ဘုရား သီတင်းသုံးတော်မူခဲ့တဲ့ဇေတ၀န်ကျောင်းတော်၊ ဗောဓိပင် စသည်တို့လည်း အထင်အရှား တွေ့နိုင်ပါတယ်”။